बाहिरियो नयाँ रहस्य: गोकुल बाँस्कोटाको अडियो बिनोद चाैधरीकै कारण बाहिरिएको खुलाशा! – PathivaraOnline
Home > समाचार > बाहिरियो नयाँ रहस्य: गोकुल बाँस्कोटाको अडियो बिनोद चाैधरीकै कारण बाहिरिएको खुलाशा!
काठमाडौं । एक साता यता पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको बर्हिगमनले सडकदेखि सदनसम्म तताएको छ । बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड रुपैयाँ कमिसनको बार्गेनिङ गरेको अडियो गत बिहीबार (८ फागुन)मा सार्वजनिक भयो । उक्त अडियो सार्वजनिक भएसँगै बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामासमेत दिइसकेका छन् ।
तर, उनको बहिर्गमन अर्थात टेप रेकर्ड अडियो सार्वजनिक हुनुमा विभिन्न व्यक्तिको भूमिका रहेको भन्दै समाचार आइरहेका छन् । यसैक्रममा बुधबार (१४ फागुन)मा प्रकाशित जनआस्था साप्ताहिकको समाचारमा बाँस्कोटाको बहिर्गमनमा अर्बपति विनोद चौधरीको भूमिका रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
गोप्य कुराकानी भएको १५ महिनापछि अडियो सार्वजनिक हुुनुलाई रहस्यमय भन्दै सो अखबारले चौधरीको कारण बाँस्कोटाको अडियो सार्वजनिक भएको दाबी गरिएको छ । विनोद चौधरीहरूको टेलिकम सञ्चालनमा सरकार स्थायी रूपमै बाँस्कोटा बाधक देखिएपछि एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रमार्फत बाँस्कोटाको अडियो सार्वजनिक भएको दाबी गरिएको छ ।
जनआस्था लेख्छ, ‘बाँस्कोटाले फागुन १ गते ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि तत्कालीन एसटीएम (अहिलेको सीजी टेलिकम)लाई १ करोड १८ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलरको हिसाब देखाउन चुनौती दिएका थिए। उसले विश्व बैंकसँग सहयोगमा पाएका रकमबाट भएको काम कारबाहीको विवरण खोजिने पनि बाँस्कोटाले भनेका थिए। उक्त रकमको खर्च, गर्नुपर्ने काम र पूर्वसर्तका प्रावधान पूरा भए कि भएनन् भनेर अनुसन्धान हुने उनको भनाइ थियो।
तत्कालीन एसटीएमले ५ सय ३४ गाउँमा सेवा सेवा विस्तार नगरेको, भिस्याटलगायत प्रविधिको अवस्थाबारे सत्यतथ्य जानकारी नदिएकोबारे चर्काेसँग कुरा उठेको थियो। तर त्यतिबेलासम्म चौधरीले पहिला अनुदानको पैसा लक्षित कामभन्दा फरक शीर्षकमा सिध्याइसकेका थिए। अहिले पनि त्यो पैसाको भ्याट फिर्ता लिने चक्करमै छन्।’
राजधानीकाे गोङ्गबु नयाँ बसपार्कमा प्रहरीले छापा मा’र्दा प्रहरी नै चकित …..!